Guddigii Maaliyadda golaha shacabka oo la kala diray • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Guddigii Maaliyadda golaha shacabka oo la kala diray
Guddigii Maaliyadda golaha shacabka oo la kala diray
November 28, 2018 - By: Abdirisak Faamoos
Qoraal kasoo baxay ku simaha gudoomiyaha baarlamaanka ahna gudoomiye ku xigeenka 1-aad ee golaha shacabka Cabdiweli Ibraahim Muudey ayaa lagu kala diray gudigii maaliyadda iyo qorsheynta golaha shacabka.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in wada shaqeyn xumo gudiga dhexdiisa ah ay sababtay in ay gabi ahaan istaagaan howlihii uu gudigu ka hayay golaha shacabka sidaasna lagu kala diray.
Waxaa kaloo qoraalka lagu sheegay in sida ugu dhakhsiyaha badan lagusoo dhisi doono gudiga maaliyadda isla markaana la dooran doono gudoomiye cusub oo hogaamiya.
Arintan ayaa u muuqata mid buuq ka dhex dhalinaysa xildhibaanada golaha shacabka maadaama gudigan lakala diray ee maaliyadda ay horey u gudbiyeen warbixin la xiriirta masuq lagu soo eedeeyay wasaarada maaliyadda iyadoona in badan oo xildhibaano mucaarad ah ay qeyb ka ahaayeen gudigan la kala diray.
Si kastaba ha ahaatee kala dirista uu gudoomiye ku xigeenka 1-aad ee golaha shacabka ku sameeyay gudigii Maaliyadda golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa kusoo aadaysa xilli isla maanta ay xildhibaano kamid ah golaha shacabka dacwad ka gudbiyeen Mahad Cabdalla Cawad gudoomiye ku xigeenka 2-aad ee Baarlamaanka oo ay ku eedeeyeen in uu baalmaray xeer hoosaadkii golaha shacabka